I-Holly @ Rustic Cabins ku-NC500 nr Lochinver - I-Airbnb
I-Holly @ Rustic Cabins ku-NC500 nr Lochinver
Achnacarnin, Scotland, i-United Kingdom
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Murray
I-HOLLY ingelinye lamakhabethe amabili angabhukwa eRustic Cabins, abekwe eNyakatho Ntshonalanga yeScotland, eNhlonhlweni yaseStoer, imayela elingu-1 ukusuka emzileni we-NC500 kanye namamayela ayi-9 ukusuka eLochinver.
Thatha isikhathi sakho futhi uhlole leli khona elikude le-Highlands ngokuhlala e-Rustic Cabins, e-Achnacarnin ehlinzeka ngendawo yokuhlala enethezekile endaweni yokuphumula yabantu abangafika kwabangu-4.
Njengoba kunezintaba ezimangalisayo namabhishi amangalisayo eduze, i-Holly iyisisekelo esikahle kuwe, umndeni wakho nabangane ongafunda kuso.
Enhlonhlweni enhle ye-Stoer Head kukhona ekhoneni elithule lama-Rustic Cabins.
Ngesango futhi udlule endaweni encane enamahlathi, ufinyelela kumakhabethe ase-HOLLY nase-HAZEL. Zombili zibheke ezintabeni zase-Assynt zinendawo eningi ngaphandle ukuze zijabulele, noma yisiphi isimo sezulu.
Ngaphakathi uzothola igumbi lokuhlala elihle elinegumbi eliphindwe kabili, igumbi lamawele nekhishi elibheke emaceleni kanye negumbi lokugezela elinobhavu kanye neshawa.
Leli ikona elithule emzileni omkhulu wezivakashi i-NC500. Izungezwe yi-crofting farm land kanye nengxube yabahlali namakhaya amaholide.
Indawo enhle yokuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili uphume futhi uhlole amabhishi kanye nezwe elingasogwini.
E-Clachtoll ibanga elingamamayela angu-3 kuphela kunesitolo esigcwele kahle sasogwini (e-Flossie's) kanti idolobha eliseduze laseLochinver lingamakhilomitha ayi-9 nje kuphela.
Sithanda ukuzama ukuhlangana nawe lapho ufika ukuze sikuvumele ukuthi uzinze futhi ukhululeke. Ngemva kwalokho, sitholakala ngocingo noma nge-inthanethi, kodwa njengoba sihlala e-croft (ipulazi elincane) eliseduze sidlula izinsuku eziningi ukuze sibone ukuthi ayikho yini imilayezo ebhaliwe esele eshedini esingayinakekela.
Sithanda ukuzama ukuhlangana nawe lapho ufika ukuze sikuvumele ukuthi uzinze futhi ukhululeke. Ngemva kwalokho, sitholakala ngocingo noma nge-inthanethi, kodwa njengoba sihlala e-c…
Hlola ezinye izinketho ezise- Achnacarnin namaphethelo